Họtelu ndi di na Ilesa, Osun - Tinye akwụkwọ ugbu a, Kwuọ ụgwọ ma emesi a!
Ihe Nkowa Banyere Ilesa
Ilesa bụ otu n'ime obodo ochie na akikọ nke mba Yoruba. Ọ bụ otu n'ime agbụrụ ndi di elu nke di na mpaghara mba ndịda-ọdịda anyanwụ Nigeria.Owa Obokun Adimula bụ otu n'ime eze nke Ilesha amama. Ijesha bụ aha mbu nke ndị Ilesa. Ndị Ilesha bu ndị na eme nke oma na azụmahịa, o bu ha malitere ụdị azụmahịa nke ikwu ugwo na nkeji nkeji. Ná mmalite afọ ndi garaga, Ilesa bụ ebe isi ogige nke ndi agha na ọgụ megide Ịbadan na narị afọ nke iri na itolu (19th senchuri) maka nzube nke nnwere onwe.
Ilesa nke oge ugbu a bụ ya bụ isi ihe nke mbupu nke koko ga na mba ndi ozo, na ebe isi nke omenala nke ndị ya na nke di Yoruba nile.Aki nkwu na mmanụ, ji, akpụ, ugu, owu, oji, owu bu maka nke azumahia na ahịa nke ime obodo, ebe ulo oru mmepụta ihe na obodo na emepụta ntu na kapeeti , ebe enwekwara ụlọ ọrụ na emeputa mmanya, ụlọ ọrụ ebe mmeputa mmanu ugboala, na ụlọ ọrụ ebe a na etinye ihe onyonyo nkiri egwuruegwu na epekele. Obodo a nakwa arụ ọrụ nke ngwuputa ola edo bu nke na a dị ha oke nkpa.
Họtelu ndi di na Ilesa
Ụzo na-ekpo ọkụ otu esi anabata madu na ụzọ obibi ndụ nke ndị Ilesa mere ka obodo a buru o kacha nma na ihe azụmahịa nke ile onye ọbịa, ọ bụ ezie na obodo a n'ụzọ zuru ezu enyoba chabeghi anya na ihe azụmahịa nke ile onye ọbịa. Họtelu di ka Spring Hill họtelu nke di na Ilesa bụ otu n'ime họtelu ndị di elu na ụlọ nke onye ọbịa na Ilesa. Ha na-enye nlekota nke onye ọbịa di ịtụnanya na ezi erimaeri di ma nke ukwuu.
Họtelu Iyemogun Họtelu Oja Aba Họtelu Ereja Square Họtelu Osogbo Họtelu Ife Họtelu Ede